Iindlela zokuSusa iiNwele ezingqinayo | Amadoda aQinisekileyo
La ukususwa kweenwele Iya isiya iqhubeka ngakumbi. Amadoda amaninzi akhethe kwiminyaka yakutshanje ukuba athambise amasende abo ngezizathu zempilo. Ke ngoko, nazi ezinye iingcebiso zoku ukuvavanywa kwamatyhalarha.
Cwina indawo oza kuchetywa ngayo ngamanzi afudumeleyo.
Gcwalisa indawo ngeendawo zokulungisa iinwele ukuze iinwele ziwele kamnandi.
Yima phambi kwesipili uhlukanise imilenze ukuze ufumane umbono wommandla oza kuchetywa.
Ngononophelo kakhulu qalisa ukucheba isiseko sobudoda, kuqala ulandele ulwalathiso lokukhula kweenwele emva koko ngendlela eyahlukileyo.
Qhubeka nepraotum, yenze kancinci kwaye wolule ulusu kakuhle, kuba njengoko lishwabene, ungazisika ngokulula.
Emva koko hlamba kwaye uhlambe kakuhle iinxalenye ezichetyiweyo.
Xa uphuma kwisitya sokuhlambela, zibambe wazomisa kwaye uthambise ioyile ethomalalisayo okanye ehambisa amanzi kwaye mayeke yome.
Amaxesha ambalwa okuqala, sebenzisa i-talcum powder de uyiqhele.
RickTrick: Esinye sezizathu zokususwa kweenwele zamatyhalarha kukuba jonga njengokukhuliswa kwepenisi. Ukuba uneengxaki nobungakanani bepenisi yakho siyacebisa khuphela incwadi ye-master master ngokunqakraza apha
Uhlala uzisika ekuqaleni, kodwa unokufaka isicelo sokunyanga kunye nekhrimu yokubulala iintsholongwane. Ngokucheba loo ndawo uyakuba nezibonelelo ezininzi, kuba uyakubila kancinci kwaye kuya kujongeka kubuhle. Ukongeza, abasetyhini bayaluxabisa olu hlobo lokuziphatha kwendoda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iindlela zokuSusa iiNwele ezingqina
Ndiyiminyaka eyi-55 kwaye sele ndicoca amalungu am omzimba ngaphezulu kweminyaka elishumi, umfazi wam uyayithanda kwaye nam, ndicinga ukuba andisokuze ndivumele iinwele zam zikhule kumalungu am abucala kwakhona. Ukuziva ukuba uchetyiwe kundinika kuyinto emnandi.
Amaxesha ambalwa okuqala kwaye ukuze ingarhawuzeleli, kuya kufuneka uzinike ikrimu yokuthambisa kuyo yonke indawo echetyiweyo, kodwa kuye kufike ixesha lokuba nayo loo nto ayiyomfuneko, uyiqhele kwaye ayirhawuzeli kwaphela .
Ndiyabathanda abantu basetyhini abachebiweyo okanye abathanjisiweyo. Kudala ndifuna i-wax okanye i-laser depilate ixesha elide, kodwa ukuza kuthi ga ngoku andikasithathi isigqibo, kuba i-blade intofontofo kwaye uyayenza xa uziva ngathi uyayithanda. Ndiphindwe kabini ngeveki, yeyona nto indonwabisayo, ndiyenza emva kokuhlamba kwaye kwimizuzu emibini ndigqibile, ndikulungele kwaye ndigudile.
injani into yokuthambisa ??? Ndingumlondolozi olungileyo kwezi zinto, kodwa iqabane lam langoku landinyanzela ukuba ndiyenze, ngakumbi u-x ubuhle be-qx ucoceko kwiintsuku ezi-2 ezidlulileyo. Ngenxa yezizathu zomsebenzi ndihlala ndihamba emini kwaye abakwazi ukungonwabi okwenza oku, ngamanye amaxesha ndiyazisola ngokuba ndiyenzile, ndiyamkela nasiphi na isindululo ukuba nje andinayo le picadera engapheliyo.
Ndichebe nge-tweezers, jonga ukuba ngaba zi-macho, yilahle, intle, iyaziva kwaye ibonakala intle, ngokungathi izelwe, ngokungathi behamba ze phakathi ebaleni.
Iintsomi kunye nenyani malunga nabachasi